Ihe mgbochi: Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Ihe Mgbasa Ozi Weebụ Web Weghachite Na-agagharị na Ụzọ Isi Zere Ha
Ọganihu na malware dere ezubere iche windo karịa Mac arụ ọrụusoro n'oge gara aga hapụrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ nkà na ụzụ na-eche echiche na ihe kpatara ya. Ọtụtụ na-ekwu na nke a nwere ike ịbụ n'ihi ike nkeMac mgbe ndị ọzọ hụrụ na ọ bụ n'ihi nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ nke Windows mere na-eme ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ ụgwọ maka website hackers.O di nwute na, Mac na-ewu ewu na-abia na otutu ndi Trojans na malware ndi ozo nwere ike ime ya nsogbu.
Igor Gamanenko, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara ,na-elekwasị anya na mkpa ọ dị iji kpuchido ọ bụghị naanị na ihe nchọgharị ma yana ngwa weebụ.
Sources nke ụgbọala ike maka website hackers
Mgbe ndị ọrụ nyere gị ozi iji chekwaa na nchekwa data gị, ha nwere atụmanyana ọ ga-abụ nzuzo. Ihe a na-amaghị bụ na onye na ebe nrụọrụ weebụ na-egwu ala ebe ị na-achọ ikeihe iji mee ihe - магазин одежды сундук. Ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a nwere ike ime ka ebumnobi ha.
Gwa ha ka ha na-aga obodo.
Mee ka ụlọ ọrụ gị kwụsị site na mbibi data nchekwa
Ozi onye ọrụ Pilfer
Nweta ozi dị oke egwu maka ire ere na ahịa ojii. N'okwu a,ha anaghị ahapụ ihe ọ bụla ma nọgide na-emerụ ahụ ahụ ruo ogologo oge.
Ihe kpatara ihe mere website hackers lekwasịrị ngwa
1. Echiche bụ isi ihe mere. Mgbe ị wulitere ịntanetị nke ọmasaịtị, enwere ndị na-asọ mpi na-eche na ọ bụ na ha ga-eme ihe ọ bụla ga-ekwe omume iji nọgide na-aba uru.
2. Ihe ndị metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị..Nke a na-egosi nke a site na ndị dị otú ahụ dị ka amaghi orchestrateonye kpaliri ịwakpo ndị ọchịchị na òtù okpukpe ka ha kwuo okwu.
3. Ndị na-arụ ọkụ n'obi na-esonyere ndị na-esite n'èzí mgbe ụfọdụ na-enweghị afọ ojuju.
Ihe ka ọtụtụ ọgụ ọgụ
1. Nsogbu Mgbochi SQL
N'okwu a, ebumnuche nke agha na nchekwa data bụ izu ohi, imebi ma ọ bụ gbanweeozi njirimara. Dịka ọmụmaatụ, ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịmepụta ego nke ụlọ ọrụ wee zụọ ozi ahịa ndị dị oke mkpadị ka nọmba kaadị akwụmụgwọ.
2. Nsogbu Akwụkwọ Nsọ Na-akpata Cross-Site
Nke a na-agụnye ịtinye koodu ọjọọ nke na-eme n'akụkụ onye ahụ.
3. Nkwekọrịta nke Mgbasa Ozi
Nke a na-agụnye ọgbọ nke otu puku adreesị IP maka iji idei mmiri kpuchie saịtị na okporo ụzọ.Nke a na - eme ka saịtị ma ọ bụ na - adịghị ahụ maka otu oge.
4. Ọwa Ntugharị Na-aga Anwansi
Ejila onye ọrụ kwụsị ibudata njikọ ma ọ bụ ihe oyiyi n'oge nkwenye nke enyere akana mmegbu nke mwakpo ọjọọ.
Ụzọ iji chekwaa akụ gị na ndị ọrụ gị
Site na ngwa weebụ a na-agba gburugburu ihe niile dị n'elu, enweghị onye nrụpụtaga-achọ itinye ihe mgbaru ọsọ ya. Nke a na-eme ka ọ dị mkpa itinye usoro mgbochi site na nke mbụ na nke ikpeazụ. ỤfọdụA na-ahazi ngwọta maka ọrụ ụfọdụ kpọmkwem ebe ndị ọzọ na-eme ihe na-aga n'ihu. Nyochaa nke Koodu, usoro nyocha ha, na ihe ndi ichu ntaachọrọ ka a rụọ ọrụ n'ime ndụ ndụ ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịchọọ ịchọta ihe ngwọta kpọmkwem nke onye nwere ike ịhọrọ site na itinye usoro ahụ n'ọrụnke CAPTCHAS, jiri usoro echekwara na nkwụsị akpọrọ ma ọ bụ ojiji nke Firewall Firewall Web nke na-ekesa ma gbochie ikeọgụ.